OMG! Waa halkaan Koodhadhka Ragga ugu Caansan ebid! - Macaamiisha Xad dhaafka ah ee Maalinta
Dharka Qubayska Cute! OMG, Gabi ahaanba waa kii ugu fiicnaa abid!
Maydhashada Dumarka ee Qoob-ka-dheellitirka ah ee Ugu Quruxda Badan
Lace Thongs Guusha La Gaaray Guusha Guusha
Dharka haweenka ee Womens Thong cusub oo si la yaab leh u dhammaystiran
Dib-u-hubinta Koofiyadaha Rag iyo Jaakado Cusub oo Kacaan cusub
Waxqabadka Maalinlaha ah
Heshiiska Weyn ee Maalinta Xidhashada Dharka! Baro Qandaraasyada Ugu Fiican Maalintii Qadka. Hadaad Raadineyso Qandaraasyada Maalinlaha ah ee Khadka tooska ah waxaad u timid meesha saxda ah!
Nidaamka Fadeexada La-dagaalanka
Ragga ku habboon
Lab iyo Dumar Qalabka ah
Boorsooyinka & Boorsooyinka gacanta
Xiro Shaqada (PPE)
Suumanka Badbaadsanaanta Birta (PPE)
Naagaha Sare ee Dumarka
Dharka ragga Cawlayaasha ragga
OMG! Waa Halkaan Koofiyadaha Dahabka ah ee caanka ah ee ugu caansan weligood!
Waxaa laga yaabaa 6, 2020 July 12, 2020 5327 Views 2 Comments	Dharka ragga, Dharka ragga, Dharka Ragggu dhamaadka dharka, Dharka ragga, Dharka ragga, Dharka Cayaaraha ee Ragga
Noocyo fara badan ayaa jira jaakadaha ragga in laga soo xusho, mid walbana wuxuu leeyahay mustaqbal u gaar ah xagga naqshadaha iyo dareemka raaxada. Noocyada ugu wanaagsan ee jaakadaha ugu habboon nin kastaaba way u kala duwan yihiin shaqsi kasta, dhammaantood way ku kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan waxa uu jecel yahay iyo nooca qofka uu yahay. Markaad iibsanayso jaakad qaboobaha, waxaa jira waxyaabo dhawr ah oo maskaxda lagu hayo. Sida jaakada lafteeda, waa inuu ku habboon yahay ninka doonaya inuu isagu yeesho, sida qofkasta oo qofkaas ka mid ahi u awoodo inuu xirto iyada oo aan wax dhibaato ah haba yaraatee.
(Xayeysiis ah Amazon) Iibso immika uguhoreeya ee Hoosta Dabaqda Goose Down Dharka Hooded Hooded Mens Style
Jaakadu waa inay dareentaa raaxo isla markaana aysan gacmahaaga u celin inay dhaqaaqdo. Haddii aad naftaada u iibsanayso jaakad qabow ama tan ninkaaga, hubso in qaabka jaakadku u dhigmo ninka laftiisa. Adiga si aad u iibsato jaakad saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay tahay taas oo kuu horseedda inaad u fiicantahay jaakaddan. Waqti sii qaado si aad u ogaato waxa kugu habboon adiga ama isaga haddii aad wax u iibsaneyso qof hadiyad ahaan ah.
Haddii aad tahay nooc nin isboorti ah, markaa jaakad diiran oo dabacsan ayaa ah ikhtiyaarka kugu habboon ee aad samayn karto. Dharka noocan oo kale ah ayaa noqon doona mid fudud oo si sahal ah u dhaqaaqi kara, sidaa darteed iyagu waxay noqon doonaan kuwo aad u weheliya, gaar ahaan haddii aad jecleysato orodka. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa cimilada diiran si aad u diirimaad u hesho waqtiyada qaboobaha, oo aad wali ku raaxeysatid sameynta isboorti aad jeceshahay. Haddii aad rabto inaad iskudaydo inaad naftaada u ekaato mid kale, jaakad dhaadheer oo culus ayaa laga yaabaa inaysan ahayn doorashada saxda ah.
Haddii aad jeceshahay inaad u ekaato masar, waxaad isku daydaa inaad hesho jaakad jidhkaaga ku dhegan. Sidookale, iska hubi inay dabooleyso jirkaaga oo dhan oo uusan usheegin dhabarkaaga hoose ama feedhahaaga, waxaad rabtaa in jirkaaga sifiican iskuxirnaado! Haddii aadan ku qanacsaneyn in aad noqoto qof ka sii weyn ragga kale ee kugu xeeran, markaa waxay noqon kartaa fikrad xariif ah inaad la tagto shay aad u weyn.
Jaakad noocan oo kale ah way fiicnaan kartaa maxaa yeelay kama baxeyso dareen weyn sida jaakad dhaadheer ayaa laga yaabaa inay sameyso. Koofiyadaha ragga ayaa u ekaan kara si la yaab leh marka lagu soo xidho suun, shaati, iyo laba surwaal. Haddii aad raadineyso wax kuu horseedaya inaad u ekaato oo aad dareentid ninnimo badan, markaa waxaan soo jeedin lahaa inaad isku daydo jaakooyin badan oo kadhigta kalsoonidaada inaad kalsooni ku dheehan tahay. Wax ku habboon nooca dhaadheer ee ninku waa jaakad gaagaaban oo laga gashan karo dharkaaga caadiga ah.
(Xayeysiiska eBay) Soo Iibso Iibka Dharka Ragga Ragga ee xilligan Qiimahoodu Waa weyn yahay
Badanaa waxay ka samaysan yihiin dhar waara oo waxaa lagu sameeyaa qaab jaakad dhaadheer. Waxay gashan kartaa nooc kale oo dhar ah, sida funaanad, oo waxay umuuqataa mid aan caadi ahayn isla markaana quruxsan isla waqti isku mid ah. Koofiyadaha ragga ayaa leh dhowr cabbir oo kala duwan, laga soo bilaabo yar yar, dhexdhexaad ah, weyn, cabbirro XL ah, iyo illaa iyo illaa 4XL cabir. Markay tahay iibsashada khamiiska ragga, waa fikrad hal abuur leh in la ogaado cabirka lagu iibsanayo iyadoo loo eegayo dhererkaaga.
Jaakadda ragga waxaa loo isticmaali karaa saddex ujeeddo. Marka hore, waad u isticmaali kartaa munaasabadaha sida habeen banaanka looga baxo ama arooska, marka labaad, jaakadu waa inay kaa caawisaa inaad diirimaad gasho, marka saddexaadna waxaa loo isticmaali karaa caddeyn moodal ah. Markaad raadineyso jaakad qumman, waxaa jira dhowr talo oo ay tahay inaad ogaato kahor intaanad lacagtaada bixin. Waxyaabaha qaarkood ee tixgelinta la siinayo ayaa ah maaddada, qaabeynta, dhererka, iyo dhumucda sheyga.
Sida qalabka, waa inaad iibsataa wax u istaagi kara dhowr nooc oo cimilo cimilo sida roob, baraf, iyo qabow qadhaadh. Si kastaba ha noqotee, isla waqtigaas, waxay sidoo kale awood u yeelan doontaa inay kaa dhigto inaad u muuqato mid wanaagsan oo aad naftaada ku wanaagsan tahay. Waxaa jira qaar jaakadaha ragga taasi waxay ka samaysan tahay dhogor kasta, halka kuwa kalena ay ka samaysan yihiin dhar kale, laakiin waxkastoo aad doorato, shaki kuma jiro in jaakad ninku si fiican kuu sameeyo ay kuu egtahay mid weyn oo aad dareemeyso wax la yaab leh sida aad adduunka ugu sarreyso!
Ka daawo YouTube:
Maqaallo caan ah oo badan:
Qalabka toosan ee loo yaqaan 'Blockbuster Authentic Badet' Jaakadda maqaarka ee maqaarka
Jaakadaha Banana Republic
Jaakadaha Adidas ee Ragga
Qiyaasta Coats Ragga
← Dammaanad Qaadasho La Xushmeeyay oo Loogu Talo Galay Boorsooyinka
Qalabka toosan ee loo yaqaan 'Blockbuster Authentic Badet' Jaakadda maqaarka ee maqaarka →
fikirrada 2 on "OMG! Waa Halkaan Koofiyadaha Dahabka ah ee caanka ah ee ugu caansan weligood!"
Pingback:	Craziest Neeftaada Maskaxda Si Qurux Badan u Dheeree Denim jaket ragga
Pingback:	Qalabka toosan ee loo yaqaan 'Blockbuster Authentic Badet' Jaakadda maqaarka ee maqaarka
Kusoo Dhawow Wargeyskeena bilaashka ah.
Raac, Like, Share & Faallo ka bixi Facebook
Kala Soco Twitter
RSS - dhejin
Fikradaha iyo fikradaha lagu muujiyey degelkan websaydhka ayaa si cad u ah Qoraaga. Websaydhahan waxaa loo qoray si niyad wanaag ah si ay uga caawiso bixinta macluumaad badan oo ku saabsan ogaanshaha heshiisyada moodooyinka waaweyn ee internetka. Macluumaad kasta oo kujira websaydhkan waxaa loogu talagalay "MACLUUMAADKA GUUD EE KELIYA". Sheegasho kasta oo alaab ah, tirakoob, tixraac (ama) kale oo ku saabsan badeecad ama adeeg waa in lagu xaqiijiyaa soo-saaraha, bixiyaha ama qeybta ay khusayso.
Fadlan la soco in markaad ka baxayso degelkan, dhammaan degellooyinka kale ay leeyihiin “Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah & Shuruudaha & Shuruudaha” oo ka baxsan Maamulka Qorayaasha degelkan. In kasta oo dadaal kasta la sameeyey oo si buuxda diiradda loogu saaray qaabeynta websaydhkan inuu noqdo mid dhammaystiran, sax ah oo saxna ah intii suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay jiraan khaladaad ku dhex jira qoraalka waraaqda qoraalka ah ee aad aqrinaysid.
Qoraagu mas'uul kama aha wixii khasaare ah, khasaare ama dhaawac ah haddii si uun lagu eedeeyo inuu xiriir la leeyahay adeegsiga websaydhkan. Boggan waxaa ku jira xiriiriyeyaal xiriir la leh halkaasoo xayeysiiyaha / abuuraha degelkan uu kasbado guddi u soo jeediya alaabada iyo sidoo kale xayeysiinta macnaha guud. Boggan wuxuu leeyahay xiriirinno ku saabsan Amazon, eBay, Warshadda Komishanka, Google AdSense iyo alaabada Automattic.
Ogaysiiska Xuquuqda Millennium Digital Digital Ogeysiiska
GDPR Xaqa ah in la iloobo, Foomka Xogta / Soocelinta Xogta
Copyright © 2020 Waxqabadka Maalinlaha ah. Dhammaan xuquuq dhowran.
Dulucda: ColorMag Pro by ThemeGrill. Waxaa suuro galiyay WordPress.